Godina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo Magaalaa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGodina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo Magaalaa.
Godina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo Magaalaa. Bakaatti Barsiisaa Husseen Aadam kan Humnoota Mootummaatin Guuyyaa Kaleessaa Adoolessa 30/2020 ajjeefame
Waggaa 25 guutu humna hidhate ijaaru kan hin dandeenye amma ‘yoo nu hidhan hidhamu yoo nu ajjeesan ajjeesamu’ jedhani bo’uun maal godha.
Faaydaa fi fedhii Oromoo fi Oromiyaa humna waraanaa fi Qeerroo qofaan kan mirkaneeffamu fi tiikfamu danda’u. Biyya sirna Nafxanyaatiin ijaaramte diigani deebisani akka Oromoof taatu ijaaru, ykn biyya walaba taate tolfachu, male Oromoon biyya sanatti nagaa argate, misoome, kabajaan hin jiraatu.
“Biyya kana keessa rakkoo nageenyaaf wabii wanti jedhu hin jiru. Haga jirutti, akkanumaan hojjennee, gaafa dabaru kan itti anuu itti fufee qabsoo kana xumuruudha.” Jaal Daawud Ibsaa har’a uggura jalaa ba’uu yeroo BBC afaan Oromooti himan kan dubbatan keessa.
BB$: Adoolessa 31/2020
Godina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo Magaalaa. Bakaatti Barsiisaa Husseen Aadam kan Humnoota Mootummaatin Guuyyaa Kaleessaa Adoolessa 30/2020 ajjeefame guyyaa har’aa sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira.
Barsiisaa Husseen Aadam Nama quuqama sabaa qabuu fi magaalaa Bakaa keessatti nama beekkamaa tahuu jiraattonni magaalattii ni dubbatu. Barsiisaa Husseen Waggoota 4 oliif Hojjii Barsiisummaa irratti bobbahuun Mana Barnoota Araddaa Biluu keessatti dhaloota Abdii Boruu hedduu oomishee jira.
Ajjeechaa Artisti Haacaaluu Hundeessaatin Walqabatee, Hiriira Bahamee tureen, Qabeenyi Mootummaa fi Kan Namoota dhuunfaatis barbadaawuun ni yaadatama. Magaalaa Bakaa keessattis kan tahe kanuma, sababa kanaaf Namoota Quuqama sabaa Qabanii fi Hawaasa biratti dhageettii qaban, Maqaalee isaanii barreeffachuun Humnoota Mootummaatin waan barbaadamaa turaniif, Dargaggoonni baay’een baqatanii akka jiran odeeffannoon achirraa arganne ni mirkaneessa.
Barsiisaa Husseen Aadam, Akkuma Oromoota kaanii Baqatee barbaadamaa turus Maatii waan qabuuf Yeroo inni mana isaa Magaalaa Bakaa Ganda Noolee keessatti argamu Hulaa duratti, gaaffii tokko malee, Rasaasa itti roobsun ajjeesanii biraa deemuu maatii keessaa namni tokko BBS tti himee jira.
Barsiisaa Husseen Aadam Nama fuudhee maatii qabu yeroo tahu, Intala dubraa takkaa fi Ulfa ji’oota muraasaa garatti dhiisee biraa wareegame. Barsiisaa ahuseeen, Guyyaa Har’aa Adoolessa 31 Guyyaa Ayyaana Iida Arafaatin Sirni Awwaalcha isaa Magaalaa Bakaa Ganda Noolee keessatti raawwatee jira. Barsiisaa Husseen Aadam Rabbiin Jannataan Haa qananiisu, Maatii fi Firoottan akkasuma Namoota ajjeefamuu isaa kanaan gaddi itti dhagahame hundaaf Jajjabina Hawwina.
Sabaa fi Sab-lammootni Impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan waa’ee Uummata Oromoo hangam beeku? – https://t.co/xIxv6ZSyVO pic.twitter.com/3cquTIm0um
— Kichuu (@kichuu24) July 31, 2020
Osoo Mana Murtii hin dhihaatin qeerroowan Dambal-Baaletti Hiraarfamaa jiran Muraasa.
1 Muhammed sh/Abdurahhim
2 Abdii Haaji qamar
3 Haaji muussaa Haaji aadam
4 Abduu ilmii
5 Kaliil Jamaal
6 Abaadir Huseen
7 A/Rahman Yuusuf
8 Umar ismaail
9 Saadiq Ayyuub
Hidhamtoota murtii malee Baalee Diinshootti Hiraarfamaa jiranii fi Tumaadhan Caccabsaman!
2 jamaal abduqquu
3 Awwal ibraahim Garutee
4 Jamaal muhammed husaa
5 Kadiir Obsaa Hajjii
6 Abdussalaam Sulxaan waashoo
7 Kadiir Tulaa Haaji
8 Fatii Tulaa Haaji maamma
9 Jeylaan ibraahim
10 Abduu Abaadir
11 Awwal Ibraahim
12 Awwal Amaan
13 Siraaj Amaan haaji ayyoolaa
Kanneen Tumaadhan Caccabsaman!
1 Abduu Kaliil
2 Abdulmannaan Kadiir Kabir said!
Qeerroowwaan Du’a hacaalu booda Baalee Bahaa Aanaa beeltu Kurkurruutti Hidhamanii Hiraarfamaa jiran! haga tokko maqaan kinooti! nama 26!
2, Hasan jamaal
4,Muhammad Ahmad alii
6 miftahaa kaliil
7 Dureessaa jamaal
8 obsaa abdussalaam
9 Guutamaa gazzaali
10. Amaan muzayyan
11 Baalee Bayaan
12 awwal jamaal
13 shaffis haaji aadam
14 Sayyid abdoo Huseenoo
16 Taammirat Mokonnin
17 Abdurazaaq maammee
18 Naajii Qaasim
19 Sheek ahmed abdurqe
20 Kadiir Aliyyii
21 Abdiisaa Badhaasoo
22 Anaaji K/Umar(Dubr)
23 ayyantuu abdul jawaad (Dubr)
24 Waarituu Sulxaan(Dubr)
25 sittiinaa jamaal(Dubr)
26 kadiir Maammee
Odeessa Qabatamaa Xiyyeeffannoon Itti Kennamuu Qabuu dha.
HD ABO irratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf kanneen Oli bultii horfofuun Waajjira Tika Biyyoolrssaatti gabaasaa galchan namoota armaan gadiiti.
NAMOONNI KUNNEEN AMMA BARBAADAMANII BIRA GAHAMUU QABU!
1. Alamu Qinaxxiifi
2. Bayyanaa Biraanu
Nammoonni kun Oli bultii HD ABO hordofuun namoota guyyaa guyyaan Waajjira Tika Biyyoolessaatti gabaasaa turanii dha.
Karaa Mootummaatiin shira kana Qindeessuu fi karoorsuun kanneen raawwachiisaa jiran,
1. MM Dr. Abiyi Ahimad
2. Damallash Gabramikaa’el
Yoo ta’an dhaaba keessatti ammoo qooda irraa fudhachuun dirqama raawwii kanaa kan gaggeessa jiran,
1. Ibsaa Nagawoo
2. Jabeessaa Gabbisaa fi
3. Atoomsaa Kumsaati.